Labo nin oo afduubnaa oo lagu sii daayay Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandLabo nin oo afduubnaa oo lagu sii daayay Garoowe
April 10, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Labo nin oo niman deegaanka ah ay Garoowe ku afduubeen bishii lasoo dhaafay ayaa lasii daayay, oday dhaqameed ayaa sidaa sheegay maanta oo Talaado ah.
Labada nin ayaa ka yimid magaalada Burco ee Somaliland waxaana afduubay niman deegaanka ah kuwaasoo rabay in ay ku bedeshaan walalkood oo ku xiran Burco, sida oday dhaqameedku uu sheegay warsidaha Puntland Mirror, isaga oo intaas ku daray in odayaasha dhaqanka Garoowe ay kaalin weyn ka qaateen sii deynta nimankaas.
Labada nin ayaa la geeyay guriga Islaan Ciise oo kuyaala Garoowe, waxaana la filayaa in ay magaaladoodii dib ugu noqdaan, sida oday dhaqameedku uu sheegay.
November 27, 2017 Ciidamada PSF oo qabtay afar xubnood oo looga shaki qabo Al-Shabaab
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah magaalada Boosaaso kusoo bandhigay waxyaabo qarxa iyo shan nin oo watay, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka. Taliyaha booliiska qaybta gobolka Bari Gaashaanle [...]